02/09/2011 : Rodin Rakotomanjato : "Aleo hanao eo ihany ..." (+vidéo)
Tonga ny fe-potoana nomen'i TGV ny SADC hanomezan'izy ireo ny daty hanaovana sonia ny tondro zotra satria nambaran'ny mpanongam-panjakana fa hatramin'ny andron'ny 30 Aogositra no "ultimatum" nomeny ny vondrona SADC hanomezana izany. Ny 01 Septambra dia nanao fanambarana i TGV fa "hiroso amin'ny fanaovan-tsonia na dia tsy eo aza ny SADC". Mivandravandra mampatahotra eo imason'izao tontolo izao ny FATE fa tsy mba mipitrapitra mampalahelo ka toa izy indray no mibaiko an'ireo Filoham-pirenena lanim-bahoaka 14 mpikambana ao amin'ity vondrona aty atsimon'ny Afrika ity.
Fanontaniana no apetraky ny Depioten'Arivonimamo Rodin Rakotomanjato :"iza no hiaraka hanao sonia aminy eo". Efa azo tsapain-tanana ny tsy fahombiazan'ny raiamandreny mijoro tamin'ny fampihaonana ireo vondrona politika teny Ivato ny Alatsinainy sy Talata teo. Raha nolazaina fa ireo hery politika 11 no hanatrika izany fivoriana izany dia nivoaka ireo vondrona enina efa nilaza ny heviny momba ny tondro zotra saingy lasa 20 mahery ny vondrona politika niatrika ny tohin'ny fivoriana. Nolazaina ihany koa fa hanatrika izany ireo masoivoho rehetra miasa sy monina eto Madagasikara saingy tsy nisy na tamingany iray aza. Tsotra ny hevitr'i Rakotomanjato Rodin : "aleo hanao dia ho hita eo fa raha ny fankatoavana iraisam-pirenena tsy ho azon'ny FATE velively".
23/08/2011 : TIM : hiakatra ny faritra 21 (+vidéo)
22/08/2011 : Henri Randrianjatovo : "Fitoniana toy inona no tadiavin'ny FATE?" (+vidéos)
Nanaitra ny maro ny vaovao nivoaka tamin'ny faran'ny herinandro teo. Nampangaina ho naniraka olona nanipy grenady tamin'ny tranon'ny ministry ny fitsarana FATE sy ny Rezimanta Miaramila voalohany eo Analakely i Mamy Rakotoarivelo sy i Ralitera Andrianandraina. Ity farany moa dia tadiavin'ny mpomba an'i TGV halefa any amin'ny vary tsy mifody mihitsy. Manoloana izany indrindra dia manontany tena ny olom-pirenena rehetra amin'ny mety ho sarim-pitoniana katsahin'ny FATE.
Toa zary kabary ambony vavahady ny filazana fa tsy misy afa-tsy ny samy Malagasy no mahavaha ny olana. Raha tsy misy mantsy izany fitoniana ara-politika izany tsy ho afaka hifampiresaka velively ny samy Malagasy ary tsy hahita vahaolana mihitsy isika satria hifampiahiahy lalandava. Ho an'ny Depiote Henri Randrianjatovo dia "isan'ny fitoniana takiana ny fampitsahara ny fanenjehana noho ny hevitra politika ankoatra ny fahafahan'ny sesitany miverina an-tanindrazana sy ny fivoahan'ny gadra politika rehetra".
Hitondra fiovana lehibe ny tany Luanda
Tsy mahakivy ny mpitolona anefa izany asa ratsy ataon'ny FATE izany satria efa taza-maso ankehitriny ny lalan-kizorana. Ny fivoriana ara-potoanan'ny SADC tany Luanda farany teo dia nandray ny famindram-pahefana teo amin'ny fitondrana ny TROIKA. Manomboka eto dia ny Repoblikan'ny Afrika Atsimo no hitondra izany ary Angola no filohan'ny SADC. Ity firenena farany ity dia manana traikefa manokana momba ny famahana krizy politika satria niaina tao anaty ady an-trrano nandritran'ny taona maro. Afrika Atsimo kosa dia isan'ny Firenena matanjaka indrindra aty Afrika sady sarotiny amin'ny fanajana ny demokrasia. Taorian'ny fihaonana tany Luanda anefa dia nohamafisina fa ny TROIKA avy hatrany no mandray an-tanana ny fanelanelanana momba an'i Madagasikara noho izany "tsy tokony hiroaroa saina ny vahoaka Malagasy fa tsy ho ela intsony ny faran'ny krizy" hoy ny Depioten'ny faratsiho.
20/08/2011: Ralitera Andrianandraina- fofoin'ny DST ny aiko!
Ny Alakamisy 11 Aogositra lasa teo no nivoaka ny fonja Ralitera Andrainandraina sy ireo namany, rehefa avy nogadraina nandritra ny roa taona mahery. Herinandro aty aoriana monja dia efa misy sahady ny mandat d'arrêt amin'ny anarany, ary dia tonga hatramin'ny fifofona ny ain 'ity tompon'andraikitry ny fiarovana ny HCC teo aloha ity mihitsy izany. Raha ny vaovao voaray mantsy dia tompon'andraikitra ambony eo anivon'ity direction de la sécurité du territoire, izay eo ambany fiahian'ny fiadidin'ny tetezamita no nanome ny baiko hanalana ny ainy fa tsy hanagadrana azy intsony.
08/08/2011 : Tsy ara-dalàna ny fampiatoana ben’ny tanàna indroa miantaona (+vidéo)
Mitohy sesilany ny geja ataon’ny FATE amin’ireo rafitra demokratika rehetra. Efa niainga tany amin’ny parlemanata izany ary niafara tamin’ny sefo fokontany rehefa avy nandalo tamin’ny Ben’ny tanàna. Ankehitriny dia misy ny fifidianana amboletra kasain’ny FATE hatao mikasika indrindra izany fitantanana tanàna manerana an’I Madagasikara izany. Mandritra izany fotoana izany anefa dia ampiharina amin’ireo izay lanim-bahoaka ara-dalàna koa ny tsy rariny ka atao izay tsy ahafahan’izy ireo mitana ny andraikiny. Indrindra raha mijoro milaza ny tsy rariny izy ireo ka sahy manohitra izao fitondrana tsy ara-dalàna izao.
Ny Filohan’ny Fikambanan’ny Ben’ny tanàna manerananny Nosy dia mbola nahazo taratasy fampiatoana iray volana indray rehefa natao antsojay nandritran’ny volana maro taorian’ny nivoahany ny fonja. Sakana politika ho an’ny FATE ny fijoroan’I Guy Maxime Ralaiseheno manohitra azy ireo. Vokany dia ireo milaza fa tompon’ny fahefana mihitsy no mandika ny lalàna velona mba ahafahany mandrodana izay rehetra manapotsitra ny gaboraraka ataony eto amin’ny Firenena. Raha ny fanazavana nentin’I Guy Maxime Ralaiseheno tokoa dia tsy azon’ny “fitondrana” atao ny mampihantona Ben’ny tanàna indroa amin’ny alalan’ny didy hitsivolana fa na toriany avy hatrany eny amin’ny “tribunal administratif” ilay olom-boafidy na soloiny filohan’ny delegasiona manokana avy hatrany.
05/08/2011 : Tsy hitondra vahaolana ny "unilateralisme" (+vidéo)
Ny Ankolafy RAVALOMANANA sy ny antoko Tiako I Madagasikara dia manohitra marindrano ny amboletra entina hikarakarana fifidianana ataon'ny FATE. Tsy laharam-pahamehana amin'ny vahoaka izany raha tsy mbola misy ny fahatoniana sy ny filaminana ara-politika ka iaraha-manana ny fikarakarana izay mety ho fifidianana atao. Izany anefa dia fototra iorenan'ny fanapahan-kevitra efa noraisin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ireo vondrona akaiky antsika indrindra.Saron-tava ihany ny fiantsoana mpanao politika satria efa masaka ao an-tsain'ny mpanongam-panjakana ny hanao fifidianana hanalavana sy hanamafisana ny toerana nangalarina.
Ny finiavana handray fanapahan-kevitra irery toa izany amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny dia manome vahana krizy vaovao indray ka tsy hamaha ny olana efa misy fa hanampy trotraka ny fijalian'ny vahoaka mpiray tanindrazana. "Vonona hifampiresaka ny Ankolafy RAVALOMANANA raha toa ka ny hanamorana ny fivoahana amin'ny krizy no katsahina" hoy i Mamy Rakotoarivelo. Niantso ny FATE ny Sekretera Jeneralin'ny TIM mba hampitsahatra tsy misy hatak'andro ny "unilateralisme" satria tsy hitondra soa ho an'ny Firenena izany.
25/07/2011 : Hanao sonia soridalana hono ny FATE ??? (+vidéo)
Nandeha be ny resaka hatrin’ny omaly fa niseho fahitalavitra ny Jly Dolin Rasolosoa, filohan’ny CST-FATE, ary nilaza fa “amin’ny herinandro voalohany amin’ny volana Aogositra no hatao ny sonia farany amin’ny sori-dalana”. Dia notohizany hoe “amin’ny herinandro ambony io no ho tonga eto amintsika ny ekipan’ny SADC hanomana izany”.
Fisandohana avy hatrany izao fihetsiky ny FATE izao raha ny fijerin’ny mpanara-baovao politika satria tsy tokony anjaran’izy ireo velively ny mamoaka izany daty izany fa anjaran’ny mpanelanelana.
Manampy trotraka izany ny filazan’I Rolly Mercia, minisitry ny seraseran’ny FATE, fa mbola ny Dr. Simao ihany no hitarika izany fanaovan-tsonia izany. Nandeha ihany koa ny tsaho fa nahazo “visa” ho any Amerika hono I TGV no nahatonga izao faneken’izy ireo hanao sonia izao. Io no tena aparitakin’ny mpanongam-panjakana mba hanakorontanana ny sain’ny vahoaka Malagasy indray. Mety hidika fankatoavana amin’ny ampahany izany raha ny fijerin’ny maro azy ary trandrahan’ny FATE izay fomba fahitan’ny mpiray tanindrazana sasany izay hoe “ny amerikana aza efa mankato”.
Marina fa tanjona ny ahafahan’ny vahoaka Malagasy amin’ny krizy amin’ny fotoana faran’izay haingana saingy samy hafa ny maika sy mirotoroto. Araky ny fanazavan’ny Depiote Henri Randrianjatovo dia “ny ankolafy RAVALOMANANA dia maniry ny hanaovana ny sonia amin’ny sori-dalàna nasiam-panintsiana saingy tokony manaraka ny paipaika rehetra ny ahatongavana amin’izany mba tsy hiteraka olana vaovao indray”.
18/07/2011 : Sazalahy Tsianihy : “filaminana no laharam-pahamehana ho an’ny vahoaka” (+vidéos)
Amin’ny maha-solotenan’ny vahaoaka avy any Toliara ny tenany dia mahafantatra tsara ny fijerin’ny ambanilanitra avy any amin’ny Faritra Atsimo Andrefana I Sazalahy Tsianihy. Ny Fikambanana “Tokobey Telo” izay tarihiny rahateo dia mahafaoka be amin’ny saranaga ara-tsosialy sy ny foko avy amin’iny Faritra iny. Nambaran’I Tsianihy ary fa ny vahoakan’I Toliara dia tsy manantena dingana hafa intsony ahafahana mamaha ny krizy ankoatry ny nentin’ny CPS-UA farany teo.
Efa dodona amin’ny fahitam-bahaolana ny any Atsimo ka na ny olona any ambanivohitra aza dia efa mamikitra amin’io fanapahan-kevitra tany Addis-Abeba io. Raha ny an-davan’andron’ny mpiray tanindrazana any amin’iny Faritra iny tokoa dia mandry an-driran’antsy tanteraka noho ny tsy fandriam-pahalemana. Izany indrindra no tsy mahataitra azy ireo amin’izay mety sarintsarim-pifidianana isisihan’ny FATE satria fantany fa sady tsy laharam-pahamehana izany no tsy hamaha olana velively. Raha ny fananetanan’ny mponina any Toliara sy ny manodidina, hoy ihany nyFilohan’ny Tokobey Telo, dia hita hainagana ny lalan-kizorana hamahana ny krizy mba hampitsaharana haingana ny gaboraraka ataon’ny mpanongam-panjakana.
Fanapahan-kevitra tany Addis-Abeba :
14/07/2011 : Iza indray no sahy hisakana ny fankatoavana iraisam-pirenena ? (+vidéo)
Ny fanapahan-kevitra noraisin'ny CPS-UA dia mametraka ho azo tsapain-tanana ny fankatoavana iraisam-pirenena na dia tsy mbola am-pelatanana aza izany. Ny fanatanterahana izany dia miakina amin'ny fahatsapan-tenan'ny mpanao politika, indrindra ireo nanongam-panjakana ka naka fahefana teny an-dalambe tamin'ny alalan'ny basy aman-tafondro. Raha mahatsapa-tena fa isan'ny vahoaka Malagasy ihany koa izy ireo dia hahalala oniny amin'ny gaboraraka nataony hatramin'ny taona 2009 no mankaty. Ny Foloalindahy koa dia manana andraikitra lehibe amin'ny fanamorana ny fahatanterahan'izany soso-kevitra avy amin'ny Vondrona Afrikana izany.
Ny posa-kevitra nataon'ny mpanao politika Malagasy ihany no nazahoana izao fehin-kevitra izao ka tsy tokony ho "volo manoha-randrana" ny "tandroka aron'ny vozona" raha tena mijoro ho mandatehezan'ny Repoblika. Tsy bitika koa anefa ny andraikitry ny vahoaka satria ny fototra nitolomany hatrizay no manoloana azy ankehitriny ary anjarany mivantana ny manao izay haha-tanteraka izany. Fanomanana manontolo ny fahatongavan'ny Filoham-pirenena RAVALOMANANA Marc no anjara-asan'ny vahoaka Malagasy ka tokony hivonona hiatrika izay mety ho sakana hapetraky ny fahavalom-pirenena izy ireo amin'izany.